Jurgen Klopp Oo Sheegay Kooxda Ugu Fiican Ee Champions League Ku Jirta Haatan & Waliba Arinta Ka Caawin Karta In Ay Ku Guulaystaan Champions League – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Jurgen Klopp Oo Sheegay Kooxda Ugu Fiican Ee Champions League Ku Jirta Haatan & Waliba Arinta Ka Caawin Karta In Ay Ku Guulaystaan Champions League
Jurgen Klopp Oo Sheegay Kooxda Ugu Fiican Ee Champions League Ku Jirta Haatan & Waliba Arinta Ka Caawin Karta In Ay Ku Guulaystaan Champions League
Tababaraha Kooxda Liverpool ee Jurgen ayaa sheegay kooxda ugu fiican ee tartanka champions league ku hartay iyo waliba sheegay rajadooda ku aadan ku guulaysiga tartanka champions league xilli ciyaareedkan.
Kooxda Liverpool ayaa caawa isku diyaarinaysa in ay la ciyaarto kooxda Fc Porto lugta 1-aad ee wareega 16-ka tartanka champions league.
Jurgen Klopp ayaa sheegay in ay kooxdiisu tahay koox u tartamaysa ku guulaysiga tartanka champions league xilli ciyaareedkan kadib markii ay ka badiyeen kooxda ugu fiican yurub wakhti xaadirkan ee Man City.
Klopp ayaa ku jawaabay markii wax laga waydiiyay in ay kooxdiisu ku guulaysan karto tartanka” Waxa aan aaminsanahay in kooxda ugu fiican yurub ee tartanka ku hadhay in ay tahay Man City, waxana aan la ciyaarnay laba kulan aan midkood ka badinay”.
“Waan ogahay in ay PSG xilli ciyaareedkan tahay koox ka duwan wakhtiyadii hore laakiin ma bar-bar dhigi karno Man City waayo waanu ka badinay Man City”ayuu sii raaciyay.
Liverpool ayaa ah kooxda kaliya ee xilli ciyaareedkan guuldarada baday iyada oo 4/3 uga badisay kulan ka dhacay Anfield kana tirsanaa horyaalka Premier league oo bishii hore dhacay.